Yakavakirwa pamadziro AP Vagadziri & Vatengesi - China Yakavakirwa pamadziro AP Fekitori
WL8200-WH2 802.11ac Wave 2 Mukati-pamadziro Dual Band Enterprise AP
WL8200-WH2 is 802.11ac wave 2 based dual band high-performance wireless access point (AP) inotsigira yakajairika 86 pani yekuisa nyore; inokodzera hotera, dzidzo, hurumende, uye netiweki dzebhizinesi. Makiyi Akakosha uye Zvakasarudzika Wired uye isina waya gigabit yekuwana WL8200-WH2 yakasanganiswa maviri gigabit ane wired uplink madoko, anogona zvechokwadi kusangana nebandwidth chinodiwa chevasina waya vatengi uye ina-gigabit pasilink Ethernet madoko anotsigira anochinjika VLAN kumisikidza, iyo ...
WL8200-WL2 802.11ac Mukati-pamadziro Dual Band Enterprise AP
Iyo WL8200-WL2 ndeye 802.11ac yakavakirwa mutengo-inoshanda isina waya yekuwana nzvimbo (AP) yakaburitswa neDCN yeiyo yekugamuchira vaeni uye indasitiri yedzidzo. WL8200-WL2 inotsigira iyo 802.11AC yakajairwa, iyo yakazara inowanika isina waya bandwidth ye 733Mbps. (2.4G bhendi inogona kupa 300Mbps bandwidth uye 5G bhendi inogona kupa 433Mbps bandwidth). Makiyi Akakosha uye Zvakasarudzika Zviri nyore kuendesa WL8200-WL2 inogona kuiswa mune yakajairwa 86 pani, inogona kuiswa nekukasira nekungogadzira maviri screws, saka kuisa imwe AP chete ...
DCWL-2000WAP (R2) 802.11n Imwe-bhendi kumadziro-yakaiswa AP
DCWL-2000WAP (R2) chitsva-chizvarwa 802.11n yakavakirwa yakakwira mutengo-inoshanda isina waya yekuwana nzvimbo (AP) yakaburitswa yevaenzi uye indasitiri yezvidzidzo. DCWL-2000WAP (R2) inotsigira 802.11n standard, imwechete 2.4G bhendi iyo inogona kupa 300M bandwidth. Inogona kuiswa mune yakajairwa 86 pani isina kuvakwazve kwemadziro uye ukobvu hwayo ingangoita 22mme. Makiyi Akakosha uye Zvakasarudzika Zviri nyore kuendesa - Kurumidza kumisikidza DCWL-2000WAP (R2) inogona kuiswa mune yakajairwa 86 pani, coul ...